အနာရောဂါစွဲအစုအဝေး | Helpmehemp | လက်ဆောင်ကဒ်များ - HelpMEHemp
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ အနာရောဂါစွဲအစုအဝေး 1
HelpMeHemp ရဲ့® Healing Bundle 1 တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂ အောင်စ Hemp Seed Oil စုပ်စက်၊ ၁ အောင်စအာဂန်ရေနံစက်စက်၊ ၄ အောင်စကြာကြိုးထည်ထောပတ်နှင့် ၃.၃ အောင်စမဂ္ဂနီဆီယမ်ခန္ဓာကိုယ်မှုတ်ဆေးတို့ပါ ၀ င်သည်။
HelpMEHemp's® Whipped Lime Body Butter သည်သင့်အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီးသင်လတ်ဆတ်သောထုံးကျောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်စားရန်လုံလောက်သောအနံ့ကိုခံစားရလိမ့်မည်။ Lime တွင် Vitamin C ပါ ၀ င်ပြီးအရေပြား၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့်တက်ကြွမှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုတိုက်ထုတ်သည့်အားကောင်းသော antioxidant ပါဝင်သည်။ HelpMEHemp's® ကြာပွတ်ထုံးခန္ဓာကိုယ်နို့ဓမ်း ဒါကြောင့်လည်းပါဝင်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပို။ ပင်မှော်ဖြစ်ပါတယ် HelpMEHemp's® လက်မှတ်Hemp Seed နှင့် Argan ဆီများ။ ဒီနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြွယ်ဝပြီးထူထဲသောသဘာဝကုန်ပစ္စည်းအားလုံးအပေါ်တွင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊
HelpMEHemp's® မဂ္ဂနီစီယမ်အမှုန်ရေမွှားသည်သင်၏နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းစတုတ္ထအပေါများဆုံးဓာတ်သတ္တုဖြစ်ပြီးသင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်သင့်အနေဖြင့်အရေးကြီးကြောင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်အရေးပါမှုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အကြံပြုထားသောနေ့စဉ်စားသုံးမှုနှင့်မကိုက်ညီပါ။ လျှောက်ထားခြင်း HelpMEHemp's® သင်၏အရေပြားပေါ်ရှိမဂ္ဂနီဆီယမ်ခန္ဓာကိုယ်ရေမှုန်ရေမွှားသည်သင်၏နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အာရုံကြောနှင့်ကြွက်သားများကိုထိန်းညှိပေးခြင်း၊ ဘာကြောင့်အိပ်မပျော်တာလဲ။
ဒီအစုအဝေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ငါနာတာရှည်နာကျင်မှုများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမဂ္ဂနီဆီယမ်မှုန်ရေမွှားကိုအသုံးပြု။ ခဲ့ကြပြီးမိနစ်အတွင်းကူညီပေးသည်။ ဤကုမ္ပဏီမှကမ်းလှမ်းသောအနာပျောက်စေသောထုတ်ကုန်များနှင့်သင်၏နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။ သူတို့သည်သင်၏ဇာတ်လမ်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြသည်၊ နားထောင်သည်၊ အမှုတစ်ခုအတွက်မည်သည့်ထုတ်ကုန်သည်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းမေးမြန်းသည့်အခါသူတို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုသည်။ ငါထုတ်ကုန်အများစုကိုနမူနာယူပြီးငါ့လျှော်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတွေ့ပြီလို့ယုံကြည်တယ်။ ငါရှုံးနိမ့်ပြီလို့ထင်ခဲ့တဲ့ငါ့ရဲ့ဘဝအစိတ်အပိုင်းကိုပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း MJ ကသင်၏ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်ထံအကြံပြုခဲ့သည်။ ငါချက်ချင်းမှာလိုက်တယ် ကိုယ်ခန္ဓာထောပတ်နဲ့အာဂွန်ဆီကိုငါချစ်တယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်အရေပြားကိုတကယ်ထူးခြားစေတယ်။ ငါနောက်ထပ်နိုင်ရန်အတွက်ချပြီး!
ကျွန်ုပ် ၀ ယ်ယူခဲ့သောကုန်ပစ္စည်းတိုင်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်! ငါထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုသည်အထိငါယုံကြည်သူဖြစ်ဖူးဘူး။ ငါဝယ်ခဲ့တဲ့ပထမထုတ်ကုန်နှစ်ခုက Organic Hemp ဆီနဲ့မဂ္ဂနီစီယမ်မှုန်ရေမွှား။ နောက်မှလက်ျာလက်၌ရွေ့လျားမှုကိုငါပေး၏။ ထို့နောက် Mega Body Butter ကို စတင်၍ ကျွန်ုပ်၏အရေပြားကင်ဆာအစက်အပြောက်များ၊ မျက်နှာနှင့်လက်များကိုပျော့ပြောင်းစေခဲ့သည်။ ငါအနီရောင်ဆီကိုဒီတနင်္ဂနွေမှာဆံပင်ပေါ်တင်နေတယ်။ ငါဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုပြောပြမယ် ငါ့ကိုသိသည့်ဘဲလ်ကောင်တီရှိမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်အားသက်သေပြရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်မယုံပါ။ ငါယုံကြည်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ် ထိုအခါငါကဒီပြောဖို့ငါပေးဆောင်သို့မဟုတ်အခမဲ့ထုတ်ကုန်ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ Donna